Guardiola & Klopp oo hoggaaminaya Tababareyaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha Janaayo ugu fiicnaa Premier League – Gool FM
(London) 31 Jan 2020. Labada tababare ee Guardiola & Klopp ayaa hoggaaminaya liiska macallimiinta u sharraxan abaal-marinta tababaraha bisha Janaayo ugu fiicnaa horyaalka Premier League.
Pep Guardiola, Ralph Hasenhuttl, Jurgen Klopp iyo Nigel Pearson ayaa ah afarta tababare ee u sharraxan abaal-marinta tababaraha bisha Janaayo ee maanta ku eg ugu fiicnaa horyaalka England Premier League.
Pep Guardiola (MCI): 3 Guul & 1 Barbaro
Guardiola ayaa Manchester City u saldhigay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, waxaana uu 10-dhibcood ka helay 12-dhibcood oo uu heli lahaa bisha Janaayo, waxaana ay dhaliyeen 11 gool oo ay ku jiraan lix gool oo ay ka dhaliyeen Aston Villa.
Ralph Hasenhuttl (SOU): 3 Guul & 1 Guuldarro
Hasenhuttl ayaa hoggaamiyey Southampton kuwaasoo ku jiray kaalinta saddexda ugu hooseysa horyaalka bishii December, waxaana uu geeyey kaalinta sagaalaad, kaddib markii ay saddex guul gaareen afar kulan oo ay ciyaareen bisha Janaayo, waxaana guulahaas ku jiray kuwo ay ka gaareen Tottenham Hotspur iyo Leicester City.
Jurgen Klopp (LIV): 5 Kulan & 5 Guul
Klopp ayaa sii kordhiyey guuldarro la’aanta xiriir ka ah ee kooxda Liverpool waxaana uu gaarsiiyey 15 kulan oo horyaalka ah, waxaana ay guulo ka gaareen Spurs iyo Manchester United shantii kulan oo ay adkaadeen bishii Janaayo, waxaana ay haatan sidoo kale kordhiyeen dhibcaha ay ku hayaan hoggaanka horyaalka oo ay ka dhigeen 19-dhibcood oo saafi ah.
Waxa uu Tababare Klopp abaal-marintan ku haystaa rikoor ah inuu shan jeer ku guuleystay xilli ciyaareedkan.
Nigel Pearson (WAT): 2 Guul, 1 Barbaro & 1 Guuldarro
Pearson ayaa sii wada inuu dib u gurasho ku hoggaamiyo Watford, inkastoo ay weli ka mid tahay kooxaha ugu hooseeya horyaalka, haddana Hornets kooxda lagu naanayso ayaa garoonkeeda aysan uga adkaan Wolverhampton Wanderers iyo Spurs, waxaan ay qaateen todobo dhibcood oo ay ka heleen saddexdoodii kulan ee ugu horreeyey oo ay ciyaareen bisha Janaayo.
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Madrid Derby